चन्द्रागिरी गोल्डकप फाइनलः फ्रेण्डस र शेर्पामध्ये कसले बाजी मार्ला ? | Hamro Khelkud
चन्द्रागिरी गोल्डकप फाइनलः फ्रेण्डस र शेर्पामध्ये कसले बाजी मार्ला ?
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – पहिलो संस्करणको चन्द्रागिरी गोल्डकपको फाइनल खेल मंगलबार हुँदैछ । फाइनल ‘ए’ डिभिजनको दुई प्रतिद्धन्द्धी क्लब एनआइबिएल फ्रेण्डस कलब र हार्भेष्ट मुन हिमालयन शेर्पा क्लबबीच खेलिने छ ।
पछिल्लो समय एन्फाको कारबाहीमा परेयता फ्रेण्डस कुनै पनि नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल्न लागेको यो पहिलो पटक हो ।फ्रेण्डसले गत भदौमा भएको जेसिस कपपछि फुटबलमा पुनरागमन गरेको थियो । त्यसयता फ्रेण्डसको यो दोस्रो ठुलो प्रतियोगिता हो ।
जेसिस कपमा फ्रेण्डस सेमिफाइनलसम्म पुग्न सफल भएको थियो । फ्रेण्डस मंगलबार हिमालयन शेर्पाविरुद्ध उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रनेछ । पछिल्लो समय घरेलु फुटबलमा राम्रो प्रदर्शन गर्दै आएको सिएमजी क्लब संकटालाई सेमिफाइनलमा पराजित गरेर हौसिएको फ्रेण्डस त्यही जितलाई निरन्तरता दिने दाउमा हुने छ ।
‘हामीसँग विदेशी खेलाडी बाहेक सबै आफ्नै उत्पादनका खेलाडी हुन् । उनीहरुले राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन् । त्यसैले हामी उपाधि जित्न सक्षम छौँ ।’ फ्रेण्डसका म्यानेजर रविन व्यन्जनकारले भने, ‘अनुभवी र ‘ए’ डिभिजन खेल्ने कुनै पनि खेलाडी नभए पनि हामीले संकटालाई पराजित गरेर आफ्नो क्षमता देखाइसकेका छौं । भोलि पनि शेर्पालाई पराजित गर्ने लक्ष्य हुनेछ ।’
यस्तै म्यानेजर व्यन्जनकारले शेर्पालाई सहज रुपमा नलिने बताएका छन् । फ्रेण्डसले बुटवलमा भएको तिलोत्तमा गोल्डकप जितेयता कुनै पनि नकआउट फुटबल प्रतियोगिता जित्न सकेको छैन । फ्रेण्डसले यसअघि बुढा सुब्बा गोल्डकप र इटहरी गोल्डकपमा पनि फाइनलमा पुग्न सफल भएको थियो ।’
यस्तै प्रतिद्धन्द्धी क्लब हिमालय शेर्पाले पनि करिब ४ वर्षको दौरानपछि पहिलो पटक फाइनल खेल्दैछ । टिमका प्रशिक्षक नवीन पाण्डेले मंगलबारको फाइनल खेल ऐतिहासिक हुने बताउँदै आफ्नो टोली फ्रेण्डससँगको खेलका लागि शारीरिक र मानसिक रुपमा तयार रहेको बताएका छन् ।
‘हामीलाई सेमिफाइनलसम्म मात्र पुग्ने टोली भनेर चिनिन्थ्यो । आज त्यो तोडिएको छ । हामी फाइनलका लागि तयार छौं ।’ प्रशिक्षक पाण्डेले भने, ‘हामी कुनै प्रेसर नलिइकन खेल्नेछौं । हार-जित आफ्नो ठाउँमा छ । फुटबललाई कसरी इन्जोए गर्ने भन्ने मात्र हो ।’ यस्तै प्रशिक्षक पाण्डेले मिहेनत गरेर टिम निर्माण गरिएको बताउँदै युथ टोलीले मंगलबार राम्रो फुटबल खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
खेल दिउसो १ बजे नैकापस्थित चन्द्रागिरी नगरपालिकाको खेल मैदानमा सुरु हुनेछ । कुनै पनि नकआउट फुटबल प्रतियोगितामा फ्रेण्डस र हिमालयन शेर्पा फाइनलमा भिड्न लागेको यो पहिलो पल्ट हो ।